18/9/2012 ချန်ပီယံလိဂ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 18/9/2012 ချန်ပီယံလိဂ်
Posted by ေမာင္ ေပ on Sep 18, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 12 comments
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား ။
၁၈.၉.၂၀၁၂ အင်္ဂ ါည/ဗုဒ္ဓဟူး မနက် မှာ ကန်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်များအကြောင်းကို ရေးတင်လိုက်ပါပြီ ခင်ဗျ ။ ဒီနေ ့ည ပွဲစဉ်များထဲမှာ ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ ့မန်စီးတီး တို ့တွေ ့ဆုံမှုဟာ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် ၊ တစ်ကယ်ကို ကြည့်ကောင်းမယ့် ပွဲမျိုးပါနေပါတယ် ။ ဒီနေ ့ညမှာ အုပ်စု အေ ၊ ဘီ ၊ စီ ၊ ဒီ က အသင်းများ ကန်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အုပ်စု ဒီ ကတော့ မရဏ အုပ်စု လို ့နာမည်ကြီးနေပါတယ် ။
* အုပ်စု အေ *
* အုပ်စု ဘီ *
* အုပ်စု စီ *
* အုပ်စု ဒီ *
၁.၁၅ မောင့်ပယ်လီယာ – အာဆင်နယ်
၁.၁၅ ဒိုင်နမိုဇာဂရက် – ပေါ်တို
၁.၁၅ ပီအက်စ်ဂျီ – ဒိုင်နမိုကိဗ်
၁.၁၅ အိုလံပီယာကို ့စ် – ရှော်ကေး
၁.၁၅ မာလာဂါ – ဇင်းနစ်
၁.၁၅ အေစီမီလန် – အန်ဒါလက်
၁.၁၅ ဒေါ့မွန် – အေဂျက်
၁.၁၅ ရီးရဲမက်ဒရစ် – မန်စီးတီး
ဒိုင်နမိုဇာဂရက် – ပေါ်တို
ဒိုင်နမိုဇာဂရက် အခုပွဲမကန်ခင်ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
၂၈.၈.၂၀၁၂ မာရီဘော် ဝ-၁ ဒိုင်နမိုဇာဂရက် (ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ)
၂၂.၈.၂၀၁၂ ဒိုင်နမိုဇာဂရက် ၂-၁ မာရီဘော် (ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ)
၈.၈.၂၀၁၂ ဒိုင်နမိုဇာဂရက် ၄-ဝ ရှာရစ်ဖ် (ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ)
ပေါ်တို အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ
၁.၉.၂၀၁၂ အိုလ်ဟန်နစီ ၂-၄ ပေါ်တူဂီ ( ပေါ်တူဂီအမှတ်ပေးလိဂ် )
၂၅.၈.၂၀၁၂ ပေါ်တို ၄-ဝ ဗစ်တိုးရီးယားဂူမာရေး ( ပေါ်တူဂီအမှတ်ပေးလိဂ် )
၁၉.၈.၂၀၁၂ ဗစ်ဆန်တေး ဝ-ဝ ပေါ်တို ( ပေါ်တူဂီအမှတ်ပေးလိဂ် )
ဒိုင်နမိုဇာဂရက် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Vrsaljko, Vida, Tonel, Ibanez
လယ် Leko, Calello, Sammir, Rukavina
ရှေ့Kovacic
ရှေ့Cop
ပေါ်တို ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Danilo, Maicon, Otamendi, Alex Sandro Lucho
လယ် Fernando, Moutinho
လယ် Varela, Rodriguez
ရှေ့Martinez
ဒိုင်နမိုဇာဂရက် နဲ ့ပေါ်တို တို ့ဟာ အရင်တုန်းက ထိပ်တိုက်တွေ ့ဆုံခဲ့မှု မရှိပါဘူး။
ဈေးအနေအထားအရ ပေါ်တို ဟာ သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ပေါ်တို တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၈ဝ အနိုင် ပဲ ဖွင့်ပေးထားပါတယ် ။
တစ်ကယ်လို ့ညပိုင်းဈေးသာ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
“ ပေါ်တို ” ကို ခပ်ပါးပါး အားပေးရင် လန်းပါမယ် ။
ပီအက်စ်ဂျီ – ဒိုင်နမိုကိဗ်
ပီအက်စ်ဂျီ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
၁၄.၉.၂၀၁၂ ပီအက်စ်ဂျီ ၂-၁ တူးလောက်စ်
၂.၉.၂၀၁၂ LOSC Lille Métropole ၁-၂ ပီအက်စ်ဂျီ
၂၆.၈.၂၀၁၂ ပီအက်စ်ဂျီ ဝ-ဝ ဘော်ဒိုး
ဒိုင်နမိုကိဗ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲများမှာ
၂၉.၈.၂၀၁၂ ဒိုင်နမိုကိဗ် ၁-၂ မိုချင်ဂလာဘတ် ( ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ )
၂၁.၈.၂၀၁၂ မိုချင်ဂလာဘတ် ၁-၃ ဒိုင်နမိုကိဗ် ( ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ )
၇.၈.၂၀၁၂ ဖီယင်နု ဝ-၁ ဒိုင်နမိုကိဗ်
ပီအက်စ်ဂျီရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell
လယ် Verratti, Motta
လယ် Menez, Pastore, Lavezzi
ရှေ့Ibrahimovic
ဒိုင်နမိုကိဗ် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကစားသမားများမှာ
နောက် Danilo, Mykhalyk, Khacheridi, Taiwo
လယ် Garmash, Miguel Veloso
လယ် Yarmolenko, Kranjcar, Gusev
ရှေ့Brown
ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲ ၁၃ပွဲကစားခဲ့ရာမှာ ၂ ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်
ပီအက်စ်ဂျီ ရဲ့Taye Taiwo, Ibrahimovic နဲ့Thiago Silva တို ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီတုန်းက အေစီမီလန်ကစားသမားများဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒိုင်နမိုကိဗ် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ ၂၈ ပွဲကစားခဲ့ရာမှာ ၂ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်
ပီအက်စ်ဂျီ နဲ ့ဒိုင်နမိုကိဗ် အသင်းတို ့ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ တွေ ့ဆုံဖူးခဲ့ပြီး
၁၆.၄.၂၀၀၉ ဒိုင်နမိုကိဗ် ၃-ဝ ပီအက်စ်ဂျီ
၉.၄.၂၀၀၉ ပီအက်စ်ဂျီ ဝ-ဝ ဒိုင်နမိုကိဗ်
ဈေးအနေအထားအရ ပီအက်စ်ဂျီ တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅ဝ အနိုင် ကို ပီအက်စ်ဂျီ တစ်ဂိုးသွင်းမှ ၁ဝ အနိုင်ပဲ ဖွင့်လာပါတယ် ။
ညပိုင်းအထိ သည်ဈေးအနေအထားအတိုင်းသာ မပြောင်းပဲ ဆက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
“““ ပီအက်စ်ဂျီ ””” အနိုင်ရမှာ သေချာပါတယ် ။
မောင့်ပယ်လီယာ – အာဆင်နယ်
မောင့်ပယ်လီယာ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
၁၄.၉.၂၀၁၂ Stade de Reims ၃-၁ မောင့်ပယ်လီယာ
၁.၉.၂၀၁၂ ဆိုချော့ ၁-၃ မောင့်ပယ်လီယာ
၂၆.၈.၂၀၁၂ မောင့်ပယ်လီယာ ဝ-၁ မာဆေး
အာဆင်နယ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
၁၅.၉.၂၀၁၂ အာဆင်နယ် ၆-၁ ဆောက်သင်ပတန်
၂.၉.၂၀၁၂ လီဗာပူး ဝ-၂ အာဆင်နယ်
၂၆.၈.၂၀၁၂ စတုတ် ဝ-ဝ အာဆင်နယ်
မောင့်ပယ်လီယာ ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Bocaly, Yanga-Mbiwa, Hilton, Bedimo
လယ် Utaka, Cabella, Belhanda, Estrada, Ait-Fana
ရှေ့Herrera
အာဆင်နယ် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Jenkinson, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs
လယ် Arteta, Diaby, Cazorla
ရှေ့Oxlade-Chamberlain, Giroud, Podolski
မောင့်ပယ်လီယာမှ ဝယ်ထားတဲ့ အာဆင်နယ် ကစားသမား ဂီရော့
မနှစ်တုန်းက ပြင်သစ်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မောင့်ပယ်လီယာ အသင်းဟာ ဒီနှစ်ရာသီအစ ၅ပွဲကန်ခဲ့ရာမှာ ၃ပွဲ ရှုံးခဲ့ပါတယ်
အခုပွဲဟာ မောင့်ပယ်လီယာအတွက် ပထမဆုံးသော ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲဖြစ်ပါတယ်
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ အခုလို ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ကို နှစ်တိုင်းပါဝင်ကစားခဲ့တာ ၁၅နှစ် ဆက်တိုက် ရှိခဲ့ပါပြီ
အခုပွဲဟာ အာဆင်နယ် နဲ ့မောင့်ပယ်လီယာ တို ့ရဲ ့ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ ့ဆုံမှုလဲ ဖြစ်ပါတယ်
အာဆင်ဝင်းဂါး ရဲ ့အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ပြင်သစ်ကလပ်တွေနဲ ့တွေ ့ဆုံခဲ့ရမှာ ရလဒ်ကောင်းများ ရှိခဲ့ပြီး ၊ ပြင်သစ်ကလပ်များနဲ ့၈ကြိမ် တွေ ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ၅ ပွဲအနိုင် ၊ ၃ ပွဲသရေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် အဝေးကွင်းပွဲစဉ်၁၂ပွဲမှာ ၂ပွဲသာ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ၈ ပွဲ ရှုံးခဲ့ပါတယ်
ဈေးအနေအထားအရ အာဆင်နယ် သရေဆိုရင် ၅ဝ ရှုံး ကို အာဆင်နယ် သရေ ၇ဝ အရှုံးဖွင့်လာပါတယ် ။
ဒီဈေးအတိုင်းဆိုရင်တော့ ၊ အာဆင်နယ် အနဲဆုံး သရေ နဲ ့အနိုင်ပါပဲ ။
ညပိုင်းဈေးဟာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ဆိုရင်တော့
တိုက်စစ်မှူးတွေကော အလယ်တန်းသမားတွေပါ ဂိုးမြူးနေတဲ့ “““ အာဆင်နယ် ””” ကို အားပေးရပါမယ်။
အိုလံပီယာကို ့စ် – ရှော်ကေး
အိုလံပီယာကို ့စ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
နိုင် ၊ နိုင် ၊ နိုင်
ရှော်ကေး အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ရှေ ့သုံးပွဲမှာ
နိုင် ၊ နိုင် ၊ သရေ
အိုလံပီယာကို ့စ် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Torosidis, Papazoglou, Siovas, Holebas
လယ် Abdoun, Maniatis, Fuster, Machado
ရှေ့Djebbour
ရှော်ကေး ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Howedes, Papadopoulos, Matip, Fuchs
လယ် Jones, Neustadter
လယ် Farfan, Holby, Draxler
ရှေ့Huntelaar
သည်နှစ်သင်း အရင်က တွေ ့ဆုံဖူးခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး
ဈေးအနေအထားအရ ဒဲ့ ပါ
သရေ ခပ်ပါးပါးရှုံး လို ့ဖွင့်တဲ့ဘက်ကနေ အားပေးရင် အောင်ဖို ့ရာနှုန်းများပါတယ်
အေစီမီလန် – အန်းဒါလက်
အေစီမီလန် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
ရှုံး ၊ နိုင် ၊ ရှုံး
၁၅.၉.၂၀၁၂ အေစီမီလန် ဝ-၁ အက်တလန်တာ
၁.၉.၂၀၁၂ ဘိုလော့နာ ၁-၃ အေစီမီလန်
၂၆.၈.၂၀၁၂ အေစီမီလန် ဝ-၁ ဆမ်ဒိုးရီးယား
အန်းဒါးလက် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
၂၈.၈.၂၀၁၂ အန်းဒါလက် ၂-ဝ AEL Limassol FC (ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ)
၂၂.၈.၂၀၁၂ AEL Limassol FC ၂-၁ အန်းဒါလက် (ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ)
၈.၈.၂၀၁၂ FK Ekranas ဝ-၆ အန်းဒါလက် (ချန်ပီယံလိဂ်ခြေစစ်ပွဲ)
အေစီမီလန် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Abate, Bonera, Acerbi, Antonini
လယ် De Jong
လယ် Ambrosini, Boateng, Montolivo
ရှေ့Pazzini, El Shaarawy
အန်းဒါလက် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Odoi, Wasilewski, Deschacht, Safari
လယ် Gillet, Biglia, Kanu,Yakovenko
ရှေ့Mbokani, De Sutter
ဈေးအနေအထားအရ အေစီမီလန် တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅ဝ အရှုံးကို အေစီမီလန် တစ်ဂိုး ၃ဝ အရှုံးပဲ ဖွင့်ထားပါတယ် ။
ညပိုင်းအထိ သည်ဈေးအတိုင်းသာ ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ““ အန်းဒါလက် ”” ကိုပဲ အားပေးရပါမယ် ။
မာလာဂါ – ဇင်းနစ်
မာလာဂါ ကန်ခဲ့သော ရှေ ့သုံးပွဲမှာ
ဇင်းနစ် ကန်ခဲ့သော ရှေ ့သုံးပွဲမှာ
မာလာဂါ ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Sanchez, Demichelis, Weligton, Monreal
လယ် Joaquin, Isco, Portillo, Eliseu
ရှေ့Saviola
ဇင်းနစ် ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Anyukov, Alves, Lombaerts, Yanbaev
လယ် Zyryanov, Denisov, Shirokov
ရှေ့Faizulin, Kerzhakov, Hulk
ဈေးအနေအထားအရ မာလာဂါ သရေဆိုရင် ငါးဆယ်အရှုံးကို နှစ်ဆယ် အရှုံးပဲ ဖွင့်လာပါတယ်
သည်ဈေးအတိုင်းဆိုရင် ဇင်းနစ် သရေ နဲ ့အနိုင် တစ်ခုခုပါပဲ
ညပိုင်းအထိ သည်ဈေးအတိုင်းသာ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ကန်ဖို ့အတွက် ကစားသမားအင်အားတွေ ဖြည့်ထားတဲ့
““ ဇင်းနစ် ”” ကို ပဲ ရွေးခြယ်ချင်ပါတယ် ။
သည်နှစ်ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်မှာ ဝါသနာရှင်များကို ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် ပွဲ
ရီးရဲမက်ဒရစ် – မန်စီးတီး
ရီးရဲမက်ဒရစ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲများမှာ
၁၅.၉.၂၀၁၂ ဆီဗီလာ ၁-ဝ ရီးရဲမက်ဒရစ်
၂.၉.၂၀၁၂ ရီးရဲမက်ဒရစ် ၃-ဝ ဂရာနာဒါ
၂၉.၈.၂၀၁၂ ရီးရဲမက်ဒရစ် ၂-၁ ဘာစီလိုနာ ( စပိန် စူပါဖလား )
မန်စီးတီး အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲများမှာ
၁၅.၉.၂၀၁၂ စတုတ် ၁-၁ မန်စီးတီး
၁.၉.၂၀၁၂ မန်စီးတီး ၃-၁ ကျူပီအာ
၂၆.၈.၂၀၁၂ လီဗာပူး ၂-၂ မန်စီးတီး
နောက် Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo
လယ် Alonso, Khedira
လယ် Ozil, Modric, Cristiano Ronaldo
ရှေ့Benzema
မန်စီးတီး ရဲ ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Maicon, Kompany, Lescott, Clichy
လယ် Yaya Toure, Barry
လယ် Silva, Nasri
ရှေ့Tevez, Aguero
မော်ရင်ဟို ရဲ ့ရီးရဲဟာ ဆီဗီလား အသင်းကို ၁-ဝ နဲ ့ရှုံးတဲ့ပွဲအပြီးမှာ ဘာစီလိုနာ နဲ ့၈ မှတ် ကွာနေပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် မော်ရင်ဟို ကတော့ ၊ ဒီနှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရအောင်ယူဖို ့ရည်ရွယ်ထားတယ် လို ့ထုတ်ပြောသွားပါတယ် ။
အုပ်စုဒီ မှာ မန်စီးတီးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ၊ ရီးရဲ ဟာ လာလီဂါ ချန်ပီယံ ၊ ဒေါ့မန် ဟာ ဘွန်ဒက်လီဂါ ချန်ပီယံ ၊ အေဂျက် ဆိုတာကလဲ အဆိပ်ရှိတဲ့ ဟော်လန်အသင်းမို ့၊ ရီးရဲအနေနဲ ့အုပ်စုဗိုလ်အဖြစ် နဲ ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်ရင် ၊ အိမ်ကွင်းပွဲတွေမှာ အနိုင် ၃မှတ်ရအောင် ကစားမှာ အသေချာပါပဲ ။
မန်စီးတီး နည်းပြ ရောဘတ်တိုမန်ချီနီ ဟာ အင်တာမီလန် ကို နည်းပြခဲ့စဉ်တုန်းက ချန်ပီယံလိဂ် ၄ရာသီ ပြိုင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ၊ ဖလားရအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ၊ မန်ချီနီ အင်တာက ထွက်ပြီးတဲ့နောက် မော်ရင်ဟို အင်တာကို ရောက်လာပြီး အင်တာမီလန် ကို ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ ရီးရဲ တစ်ဂိုးသွင်းရင် သရေ ကို ရီးရဲ တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၁ဝ အနိုင် ဖွင့်လာပါတယ်။
ဒီဈေးဟာ အောက် အောင်ဖို ့များတဲ့ ဈေးအနေအထားပါ ။
ညပိုင်းဈေး ဘယ်လို ဖြစ်လာမှန်းမသိသေးပေမယ့်
ဒါပေမယ့်လဲ မော်ရင်ဟို ရဲ ့နည်းဗျူဟာ နဲ ့ရီးရဲကစားသမားများရဲ ့ပြီးခဲ့တဲ့ ဆီဗီလား ပွဲက အရှုံးကို ဒီပွဲမှာ အနိုင်ပြန်ရှာမယ့် အနေအထားနဲ ့ပေါင်းပြီး
“““ ရီးရဲမက်ဒရစ် ””” ကို ရွေးခြယ်အားပေးချင်ပါတယ်။
ဒေါ့မန် – အေဂျက်
ဒေါ့မန် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင်
အေဂျက် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ သုံးပွဲမှာ
ဈေးအနေအထားအရ ဒေါ့မန် တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅ဝ အရှုံးကို ၆ဝ အရှုံး ဖွင့်လာပါတယ်
ညပိုင်းအထိ ဒီဈေးအတိုင်းပဲ ဆိုရင်တော့
ဒေါ့မန် ရဲ ့အနိုင်ဟာ ပြတ်သားသွားမှာပါ ။
ညပိုင်းဈေးအပြောင်းအလဲများပေါ်မှာ မူတည်ပြီးမှ ၊ ကျွန်တော် မောင်ပေ့ စိတ်ကြိုက်ပွဲများကို ကွန်မင့်ဖြင့် ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည် ။
……. အားလုံး အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ပါစေ …….
ရီးရဲမက်ဒရစ်…. တွေကတော့. ဒီည ကျတော့ အကြိုက်တွေပါ။ ကံကောင်းပါစေဗျား…
ရီးရဲမက်ဒရစ် – မန်စီးတီး – ပွဲလေးတော့ကြည့်ချင်သားဗျ..
မနက်အလုပ်မဆင်းနိုင်မှာလဲ စိုးရိမ်သဗျ ..
ရီးရဲယ် အိမ်ကွင်းဆိုတာရယ်၊ မော်ရင်ဟိုရဲ့ ပညာစွမ်းရယ် ထည့်တွက်ရင်
သေချာပေါက်နီးပါး ရီးရဲယ်လို့ ထင်တာပဲ …
ကျုပ်တော့ မော်ရင်ဟို ကိုပဲ အားပေးတော့မယ်ဗျို့ …
ကိုဆာမိ ပြောသလိုပါပဲ ၊ ဒီနေ ့ည ပွဲစဉ်တော်တော်များများဟာ အောက်ကြေး အောင်မယ့် အနေအထားကို တွေ ့ရှိရပါတယ်
ရီးရဲ – မန်စီးတီး
ရီးရဲ တစ်ဂိုးသွင်းမှသရေ ကို ရီးရဲ တစ်ဂိုး ဝ၅ အရှုံးဖွင့်လာတော့ ၊ နဂိုကမှ ရီးရဲကို ကြိုက်ပြီးသားပဲမို ့
ရီးရဲ အနဲဆုံးတော့ တစ်ဂိုးအသာနဲ ့နိုင်မှာပါ ။ နှစ်ဂိုးသွင်းရင် ရွှေဖြစ်ပြီမို ့
အာဆင်နယ် သရေဆိုရင် ၅ဝ အရှုံးကို ၃ဝ အရှုံးပဲ ဖွင့်လာပါတယ် ။ ဒီဈေးအတိုင်းဆိုရင် အာဆင်နယ် အောင်ဖို ့မသေချာနိုင်ပါဘူး ။ မောင့်ပယ်လီယာ ထံကနေ တိုက်စစ်ကစားသမား ဂီရော့ ကို ဝယ်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လဲ ရှိတာမို ့၊ သည်ကလပ်၂သင်းအကြား ဘာတွေ ညှိနှိုင်းချက် ရှိနေမလဲ
ကျွန်တော့်အထင် အာဆင်နယ် ရှုံးတောင် ရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့( ကျွန်တော့်အထင်ပါ )
သည်ပွဲမှာတော့ “အာဆင်နယ်” ကို ငြင်းပယ်ပါတယ်
ဒေါ့မန် တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅ဝ အရှုံးကို ဒေါ့မန် တစ်ဂိုး ၇၅ အရှုံးဖွင့်လာပါတယ်
ဒီဈေးဟာ ဒေါ့မန် သေချာပေါက် အနိုင်ကစားမယ့် ကြေးပါ
“ ဒေါ့မန် ” ကို ခပ်ပါးပါးလေးပဲ အားပေးပါမယ်
အေစီမီလန် တစ်ဂိုးသွင်းမှ သရေ ကို အေစီမီလန် တစ်ဂိုး ၂ဝ အနိုင်ပေးလာပါတယ်
အေစီမီလန် ကို အားပေးဖို ့ခေါ်ထားတာ သိသာလွန်းလှပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ရှုံးထားတဲ့ အေစီမီလန် ဒီပွဲမှာ အိမ်ကွင်းရှေ့သေချာပေါက် အနိုင်ကစားမှာပါ လို ့တွေးရင် မှားနိုင်ပါတယ်
အေစီမီလန် သာ တစ်ကယ် ဂိုးပြတ်နိုင်မယ် ကစားမယ် ဆိုရင် သည်ဈေးဟာ နုလွန်းပါတယ်
“““ အန်းဒါလက် ””” နဲ ့ပဲ စွန် ့စားသင့်ပါတယ်
ပီအက်စ်ဂျီ တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၅ဝ အနိုင် ကို ပီအက်စ်ဂျီ တစ်ဂိုး ၆ဝ အနိုင် ဖွင့်လာပါတယ်
““ ဒိုင်နမိုကိဗ် ”” ကို ရင်းနှီးသင့်ပါတယ်
မာလာဂါ သရေ ၅ဝ အရှုံးကို ၆ဝ အရှုံးဖွင့်လာပါတယ်
ဒီဈေးနဲ ့ဆိုရင် မာလာဂါ သရေ နဲ ့အနိုင်ပါပဲ
“““ မာလာဂါ ””” ကို အားပေးရင် ပျော်ရပါမယ်
အိုလံပီယာကော့ – ဇင်းနစ်
ဒဲ့ အနေအထားကို အိုလံပီယာကော့ သရေ ၁ဝ အရှုံး ဖွင့်လာပါတယ်
“““ အိုလံပီယာကော့ ””” ပါပဲ
သည်ပွဲမှာတော့ ပေါ်တို သရေအရှုံးကို သရေအရှုံးအတိုင်း ဖွင့်လာပါတယ်
ချမ်ပလုံ့တော့..လက်ရှောင်မယ် အကိုရေ……ပရိတ်သတ်ပဲ လုပ်တော့မယ် ဒီည
ကျွန်တော် မောင်ပေ့ စိတ်ကြိုက်ရွေးခြယ်မှုတွေကတော့
“““ ဒေါ့မန် ”””
“““ မာလာဂါ ”””
“““ အန်းဒါလက် ”””
ပေါ်တို + အာဆင်နယ် ကို ပါးပါးလေး အားပေးပါမယ်
ကျွန်တော့် ဘောလုံးပို ့စ်များကို ဖတ်ရှုအားပေးသူများအားလုံး နဲ ့
အံကြီး တို ့ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား
ယုံပြီး ပုံမောင်းလိုက်ရမရား ဟင်.. ကပေ့
ရီရဲလ်မက်ဒရစ် ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ မန်းစီးတီးဂိုးပြတ်ရှုံးသွားနိုင်တယ်။
အာဆင်နယ်ကိုလဲကြိုက်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အာဆင်နယ်က ချန်ပိယံလိဂ်
ကန်လာတာ အံတိုနေပြီ။ အနည်းဆုံးသရေတော့ ရမှာပါ။ မောင့်ပယ်လီယာ မကလို့
မေ့ ပယ်လီယာဖြစ်နေဖြစ်နေ ကျုပ်ကတော့ အာဆင်နယ်မှ အာဆင်နယ်ပဲ။
ပွဲပြီးခါနီး ပေါ်တူဂီသားလေး ကျောက်ထသွားလို့သာ
ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကြိုက် ရွေးထားတာတွေ မဆိုးဘူးဗျ
ရီးရဲ ၁ဝပြား နဲ့ ဒေါ့မန် ၇၅ပြား မိုင်းတာလေးပဲ
ဒေါ့မန်ဗျာ ပင်နတီတစ်လုံးလွဲတာ စိတ်ပျက်တယ်
ရီးရဲပွဲ ထိုင်ကြည့်ခဲ့တာ နှစ်လုံးရောဂါ ရမတတ်ပဲ
ဒီနေ့တော့ ညပိုင်းမှ ဘောလုံးပိုစ့်တင်နိုင်တော့မယ်ဗျို့